मार्क्वास टापु, एक स्वर्ग | यात्रा समाचार
मार्क्वास टापु, एउटा स्वर्ग
पहाडहरू, रमाईलो हरियो वनस्पति, निलो समुद्र, समुद्र तट र सूर्य, के हो भन्नेको एक राम्रो सारांश मार्क्वास टापु। यो द्वीपसमूह ताहितीबाट १ 1.500,०० किलोमिटर टाढा छ र यो एक साँचो स्वर्ग हो।
यदि तपाईंलाई यस प्रकारको परिदृश्य मनपर्दछ, प्रशान्त महासागर, लाइभ साहसिक कार्य र बाहिरी गतिविधिहरूको आनन्द लिनुहोस्, गउगुइन र ब्रेल हिंड्ने ठाउँमा हिंड्नुहोस् वा अद्भुत पानीको पानीमा डुबुल्की मार्नुभयो भने तपाईंको गन्तव्य मार्क्वास छ, जसरी आज हाम्रो स्थान छ। ल यसरी हामी गर्छौं!
तिनीहरू एक द्वीपसमूह हो जुन ताहितीबाट १,1.500०० किलोमिटर टाढा छ र वरपरका छन् बाह्र टापुहरु, तर केवल छ वटा बसोबास गर्छन्। आज तिनीहरू around, २०० को जनसंख्या र छन् यसको प्रशासनिक केन्द्र Nuku Hiva हो.
यी टापुहरू काल्पन बालुवा समुद्री किनारहरूको एक सुन्दर मिश्रण हो। छ मउटेन्स, तिनीहरूसँग छ उपत्यका, तिनीहरूसँग छ झरना, त्यसैले उनीहरूले प्रदान गर्ने गतिविधिहरू धेरै हुन्: घोडा सवारी, पैदल यात्रा, × × je जीप सवारी, डाइभि।, स्नोरकेलिंग… र हामीले माथि भनेंझै, कलाकारहरू गउगुइन र ब्रेल २० औं शताब्दीको सुरूमा थोरै शान्तिको खोजीमा यहाँ घुम्न थाले। र तिनीहरूले उनलाई सदाका लागि फेला पारे किनभने यहाँ पनि उनका चिहानहरू छन्, क्याल्भेर कब्रिस्तानमा।
फ्रान्सेली पोलिनेशियाका अन्य टापुहरू जस्तो छैन, यहाँ त्यहाँ कुनै लागुन वा कोरल रीफहरू छैनन् जसले समुद्री तटलाई सुरक्षित गर्दछ। छोरा ज्वालामुखी टापु तीक्ष्ण किनारहरूको, तीब्र पहाडहरू जो म्याग्माको विस्फोटहरूबाट उत्पन्न भयो, जुन जles्गलहरू र गहिरा उपत्यकाहरू छन्। बारेमा संसारको सबैभन्दा टाढाको द्वीपसमूह मध्ये एक, कुनै पनि महाद्वीपीय द्रव्यबाट धेरै टाढा, यति धेरै कि उनीहरूको आफ्नै समय क्षेत्र छ।
समूहको सबैभन्दा ठूलो टापु Nuku Hiva हो। यसलाई मिस्टिक द्वीपको रूपमा पनि चिनिन्छ र यसका धेरै रोचक साइटहरू छन्: यो हाकाउ उपत्यका झरना, संसारमा तेस्रो उच्च, अनाहोको कालो तट, पानीमुनि गुफाहरू यसले एक प्रभावशाली वनस्पति र जीवजन्तु र नोट्रे डेमको क्याथेड्रल राख्छ प्रत्येक काठमा टापुको काठ र ढु stone्गाको नक्सा। यहाँ मुख्य शहर हो Taiohae, टापुहरूको प्रशासनिक राजधानी।
यसको उच्च बिन्दु माउन्ट टेकाओ हो, १,१1.185 मिटरमा, र यसमा कोरल रीफहरू वा सपाट किनारहरू छैन। टापु धेरै ऐतिहासिक खजाना छ, Polnesnesian शैली को पत्थर घरहरु, किलेबन्दीहरु र मन्दिरहरु। यसलाई फ्रान्सले १ 1842२ मा जोडेको थियो। सुरुमा यो चन्दनको व्यापारमा समर्पित थियो र व्हेलहरूको लागि स्टप थियो, पछि फलको निर्यातमा आफूलाई समर्पण गर्न।
यस टापुको धेरै नराम्रो पश्चिमी तट छ, सानो खाडलहरू जुन गहिरो उपत्यकामा खोलिन्छ। यहाँ वरिपरिको कुनै गाउँ छैन। यो उत्तरी तटमा छ कि त्यहाँ दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोर्टहरू छन्, गहिरो खाडाहरूसहित: अनाहो र Hatihe'u A'akapa। दक्षिण पक्षमा त्यहाँ अन्य खाडीहरू छन् र त्यहाँ अधिक पोर्टहरू छन्। इनल्यान्डमा हरियो घासका मैदानहरू छन् जहाँ गाईवस्तु हुन्थ्यो।
हामीले अघि नै भनेजस्तै, प्रशासनिक केन्द्र दक्षिण तर्फ, Taioha'e हो। के तपाईंले कहिले देख्नुभयो? सर्वाइभोर, टी श्रृंखलाV? खैर, नुकू हिवामा चौथो सीजन २००२ मा फिल्म गरिएको थियो।
मार्क्वास टापुहरू उत्तरी टापुहरूमा विभाजित छन्, त्यहाँ आठ छन् र ती मध्ये नुकू हिवा हो; दक्षिणी टापुहरू, सात, र केहि टीलाहरू जुन उत्तरमा टापुहरू हुँदैनन्। दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टापु Hiva Oa होसमूहको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो टापु र दक्षिणी टापुहरूमा पनि।
यहाँ को बंदरगाह शहर हो एटूना र यो साइट सामान्यतया पहिलो बन्दरगाह हो जुन प्रशान्त महासागर पार गर्दै पश्चिममा छ। हामी त्यो भन्न सक्छौं यो समूह को सबै भन्दा ईतिहास संग टापु हो किनभने यसले धेरै पुरानो टिक्की मूर्तिहरू समावेश गर्दछ र यो ठाउँ थियो जहाँ चित्रकार पॉल गउगुइन र संगीतकार ज्याक ब्रेलको मृत्यु भयो। यो पनि भनिन्छ मार्क्वास बगैचा किनकि यो धेरै हरियो र उर्वर छ।
Hiva Ova साथ किनारहरु छ समुद्री तट र चट्टानहरू जहाँ डाइभिंग गर्ने अभ्यास गरिन्छ, तर जे भए पनि यो एक टापु हो जुन कहिलेकाहीं एक्लो महसुस हुन्छ, मौन, प्रायः पृथक। यसको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहर Atuona हो, टापो खाडीको दक्षिणी छेउमा, टापुको दुई उच्च हिमालहरू, टेमेटिउ र माउन्ट फेआनी द्वारा सुरक्षित छ।
अर्को टापु हो Ua Pou, आकार मा तेस्रो द्वीप। यो विशाल छ बेसाल्ट स्तम्भहरू, ज्वालामुखी गतिविधि को उत्पादन, जो पौराणिक योद्धाहरु, Poumaka र Poutetaunui को नाम संग बप्तिस्मा लिएको छ। सन्‌ १ 1888 मा यी स्तम्भहरूले रोबर्ट लुइस स्टीभनसनलाई आफूहरूजस्तै भएको भन्न प्रेरित गरे ज्वालामुखी मेहराबहरू जुन चर्चको सिढीमा देखिन्छ, तिनीहरूले Hakahau गाउँ को खाडी मा बाहिर हेर्दा, टापु मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण।
Ua Huka अविश्वसनीय सौन्दर्य, लगभग कुमारी छ। त्यहाँ जंगली घोडाहरू छन्, मरुभूमिको र lands्गको भूमिहरू, बाख्राहरू ... ताहुआटा यसको अंश सबैभन्दा सानो टापुको लागि हो जसमा यो बसोबास गर्दछ। तर यो प्रसिद्ध ब्रिटिश अन्वेषक क्याप्टेन कुकको लागि परिचित छ, जसले १ visited औं शताब्दीमा भ्रमण गरे। Hiva Ova बाट मात्र पानी द्वारा पहुँच योग्य त्यसैले यो एक सिफारिश भ्रमण हो। यसका उर्वरा उपत्यकाहरू सफा पानीले बेग्लै बेवास्ता गर्दछन्, तपाईं शान्तपूर्वक बस्नुहुन्छ र स्थानीय इत्र, घर लिनुहुन्छ प्रेम औषधि तिनीहरू यहाँ भन्छन्, एक शताब्दी तेल।
फतु हिवा योसँग विशाल धरानहरू छन् जुन समुद्रमा डुबेको छ र माथिबाट नाटकीय दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। १ 1937 .XNUMX मा अन्वेषक थोर हेयरदाल र उनकी श्रीमती यहाँ बस्नको लागि केही समय बसे र उनीहरूको अनुभवलाई एउटा पुस्तकमा संक्षेप गरे। यस्तो देखिन्छ कि त्यस पछि थोरै परिवर्तन भएको छ। यसका अधिकांश बासिन्दाहरू ओमोआ र यस वरपरको गाउँमा बसोबास गरिरहेका छन्। हाना वेभ क्षेत्र प्रसिद्ध द्वारा सुरक्षित छ कुमारीहरूको खाडी, सुन्दर जहाँ तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ, विशेष गरी सूर्यास्तमा ...
के तपाईंलाई यी टापुहरू मन पर्छ? यदि तपाईंलाई तिनीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने जस्तो लाग्छ भने ध्यान दिनुहोस् व्यावहारिक जानकारी जुन म तल छोडिदिन्छु, सँधै जानेर कि ती टापुहरू हुन् जुन क्लासिक फ्रान्सेली पोलिनेशिया पर्यटन मार्गमा छैन: सोसाइटी टापु, बोरा बोरा, मूरिया, ट्यूआमोटु एटोलस र लिभर्ड टापुहरू।
त्यहाँ छ वटा बसोबास टापुहरू छन् र चारसँग एउटा एयरपोर्ट छ, तर स्थानीय, ताकि तपाईं विमान वा डु by्गाबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले तहाटीबाट दैनिक उडानहरू नुकू हिवा र हिवा ओवाको लागि उडान उडान गर्नुभयो भने। अन्य टापुहरूमा जानको लागि तपाईंले यी दुई मध्ये एकबाट जानुपर्दछ। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं डु boat्गामा जानु छनौट गर्नुहुन्छ, वास्तविकता यो छ कि पोलिनेशिया मार्फत जो कोही ले तपाईंलाई लिन्छ, तपाईंले बस विकल्पहरू खोज्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि ताहिती भोइल एट लगून वा पो चार्टर वा अरनुई lux लक्जरी यात्रा, जुन दिनको एक चोटि समुद्री यात्रा गर्दछ तर महिनामा तिनीहरू 5,००० युरो हुन्। यदि तपाईंसँग आफ्नो सेलबोट छ भने तपाईं गालापागोस वा कुक टापुहरूबाट प्रस्थान गर्न सक्नुहुनेछ।
मार्क्वास टापु बीच जानका लागि तपाई उडान गर्न सक्नुहुन्छ, दुई मुख्य टापुहरू बीच त्यहाँ प्रति दिन एक वा दुई उडानहरू छन्। Ua Pou र Ua Huka को टापुहरु को दैनिक उडानहरु को लागी भाग्य छैन। एक राम्रो विचार हो किन्नको लागि ताहिती एयरको साथ मार्कवास पास। तपाईं डु boat्गामा पनि सर्न सक्नुहुन्छ, एक स्थानीय भाडामा लिनुहोस्, आफ्नो डु rent्गा भाँडामा लिनुहोस्। दक्षिणी मार्क्वासमा एउटा सांप्रदायिक डु boat्गा छ, जुन टाहुआटा र फतु हिवाको टापुमा जान्छ (hour 65 घण्टाको यात्राको लागि करीव XNUMX XNUMX यूरो राउन्ड ट्रिपको लागि)।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » मार्क्वास टापु, एउटा स्वर्ग
Sanlúcar de Barrameda मा के हेर्ने